टोनीको शीर्ष पांच इटालियन क्लासिक्स - Graton
टोनीको शीर्ष पाँच इटालियन क्लासिक्स
अप्रिल ,०, २०२१
तपाईको खानाको लागि के छनौट गर्ने बारेमा अनिश्चित हुनुहुन्छ? चिन्ता नलिनु, हामी यहाँ मद्दत गर्न आएका छौं! हामीले टोनीको उत्तरी बीचको केही मनपर्ने प्रस्तावहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं। हामीले अर्को प्लेटमा तपाईंलाई र तपाईंको साथीहरूलाई सन्तुष्ट पार्न भर्खरै प्लेट पायौं। हामी भित्र खन्नुहोस्!
प्रयास गरिएको र विश्वसनीय, टोनी-स्वीकृत पिज्जा पाईहरू!
सबैलाई एक राम्रो पिज्जा पाई मन पर्छ र टोनीको एक स्वादिष्ट चयन को साथ छनौटको साथ डेलिभर गर्दछ।
विजेता: न्यू योर्क (विश्वमा सर्वश्रेष्ठ विजेता, लस भेगास)
कुनै मान्छे यहाँ छक्क पर्दैन। टोनीको पुरस्कार विजेता न्यू योर्क शैली शैली पिज्जाको एक कारणका लागि प्रतिष्ठा छ। विभिन्न प्रकारका मिश्रित चीजहरू र प्रोसिउटो डि पर्मा यसलाई शीर्षमा राख्नका लागि, यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि यस पिज्जाले प्रश्रय पाएको हो।
रनर अप: पारंपरिक मार्गेरिता पिज्जा
कुनै पनि इटालियन रेस्टुरेन्टमा अत्यावश्यक मध्ये एक। तपाईं यो क्लासिक प्रविष्टि संग गलत जान सक्नुहुन्न।
प्रत्येक स्वाद प्यालेटका लागि उत्तम पास्ताहरू
यो एक सानो sausy प्राप्त गर्न ठीक छ। टोनीको छनौट गर्न पास्ताहरूको विस्तृत चयन प्रदान गर्दछ!
विजेता: मसालेदार Mostaccioli w / डन्जनेस क्र्याब (लेखकको विकल्प)
माउथवाटरिंग डन्जनेस क्र्याबको एक उत्तम मिश्रण, नाजुक पकाइएको झिंगा, र मसलादार टमाटर क्रीम सस। यस थालको लागि आज तपाईंको अर्डर राख्नुहोस् (र मलाई केहि बचत गर्नुहोस्!)
रनर अप: Claums संग Linguini
सेतो वाइन र एक नाजुक लहसुन बटर सॉसको साथ पकाइएको, क्लेन्जको साथ लिingu्गुनी एउटा खुशी खुशीको लागि सधैं सुरक्षित शर्त हो!
ओभर ड्रोल गर्न स्वादिष्ट मिठाईहरू
खानाको हाम्रो मनपर्ने अंश। यदि तपाईंलाई अलि अलि मिठाई नै चाहिएको छ भने टोनीको डेजर्ट मेनूमा हेर्नुहोस्। हामी भन्दैनौं, हामी वाचा गर्छौं!
विजेता: मड पाई
हाम्रो मड पाईले कुनै पनि चकलेट कट्टरपन्थीको आवश्यकताहरू तृप्ति गर्न सक्छ। जिलाटोको स्कूप (वा दुई) मा फाल्नुहोस् र ओरेओ कुकीसँग शीर्ष डेजर्ट विकल्पका लागि कुचुरिन्छ जुन कोहीले पनि मुस्कुराउन सक्छ।
रनर अप: एस्प्रेसो गेलाटो एफोगाटो
हामी निश्चित छैनौं कि यो टेक्निकल रूपमा मिठाई हो कि होइन, तर हामी त्यसलाई अनुमति दिन्छौं कि यो एकदम स्वादिष्ट छ। कफी र एस्प्रेसो प्रशंसकहरू यस सरलमा खुशीका लागि उफ्रनेछन्, तर प्रभावी ढ fla्गले रात्रिभोज पछि उपभोग!
ह्यान्ड क्राफ्टर्ड बर्गर इटालीको भ्रमण गर्छन्
जबकि यी परम्परागत रूपमा इटालियन क्लासिक्स नहुन सक्छ, टोनीले इटालियन-प्रेरित सामग्रीहरू र प्रभावहरूको साथ विशेषता बर्गरहरूको अनुपम चयन प्रदान गर्दछ।
विजेता: बुर्राटा बर्गर
इटालियन बुरता चीज, बेकन, कार्मेलिज्ड प्याज, एंगस बीफ र बाल्सामिक कटौतीले बर्गर सिर्जना गर्न सँगै आउँदछ जुन हाम्रो अधिक साहसी बर्गर प्रशंसकहरूको लागि उत्कृष्ट स्वाद जटिलता प्रदान गर्दछ।
रनर अप: क्यालब्रेस बर्गर
क्यालब्रिज मिर्च र मसलादार बीबीक्यू साउसले यस बर्गरको राम्रो स्तरको ताप र उत्साह ल्याउँदछ जुन हाम्रो कुनै पनि स्पाइसिअर अतिथिहरूले आनन्द लिन सक्दछन्!
Stromboli & Calzones ताजा दैनिक बनेको
संस्कृतिको स्टेपलहरू जस्तो, Calzones र Stromboli क्लासिक छन् यो प्राप्त हुन्छ।
मीटबलहरू, मोजराल्ला र रीकोटा चीज, भुनेको लसुन र ताजा ओरेगानोले भरिएको, म्यानहट्टन तपाईंको पहिलो भ्रमणको लागि प्रयास गर्नको लागि एउटा असाधारण मेनू आईटमको रूपमा सेवा गर्दछ।
रनर अप: टोनीको मूल Stromboli
टोनीको हस्ताक्षर स्ट्रम्बोली पक्कै पनि हाम्रो अधिक मांसाहारी पाहुनाहरूको लागि मनपर्दो हुनेछ। पेपरोनी, सॉसेज, प्रोसिउटो, मोज्राएला र चेडर चीजहरू, र अन्य मसलाहरूको एक प्रकारको साथ प्रस्तुत गरिएको, यो स्वादिष्ट खाना पकाउने विकल्प आगोमा ओभन जत्तिकै छ जुन यो पकाइएको छ।
र त्यहाँ तपाइँसँग यो छ। निर्णय गर्नको लागि तपाईंको सर्भरलाई कुनै पनि अधिक समय सोध्नु आवश्यक पर्दैन! हामी आशा गर्दछौं तपाईंले हाम्रो सूचीको आनन्द लिनुभयो! थप जानकारीको लागि, कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस् रेस्टुरेन्ट पृष्ठ। हामी तपाईंलाई चाँडै भेट्नेछौं!
नयाँ Graton रिसोर्ट र क्यासिनो वेबसाइटमा तपाईंलाई स्वागत छ
हामी हाम्रो नयाँ वेबसाइट को शुरूआत घोषणा गर्न धेरै उत्साहित छौं! यस वर्ष को धेरै को लागी हामी गाह्रो छौं […]